Hetsiky tao Mahamasina : Nataon’ireo fikambanana taxi afa-baraka ny Cua -
AccueilRaharaham-pirenenaHetsiky tao Mahamasina : Nataon’ireo fikambanana taxi afa-baraka ny Cua
Niezaka ihany fa tsy afaka. Araka ny efa fantatra, nampiantso ireo taxi eto an-dRenivohitra ny teo anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), ny sabotsy 23 septambra teo. Nizara ireo fanasana amin’ny fihaonana eo amin’ny taxi sy ny CUA ireo mpiasa teo anivon’ny kaomina ny zoma 22 septambra teo. Tamin’izany ihany anefa dia efa nanambara ny filohan’ny fikambanan’ny Taxi Antananarivo Renivohitra (FTAR), Clémence Raharinirina, fa tsy hanatrika ary tsy ho tonga amin’io fampiantsoan’ny CUA io ny eo anivon’ny FTAR satria misy ambadika politika ilay izy.
Araka izany, tsy tonga nanotrona tokoa ny teo anivon’ny FTAR, izay misy mpikambana miisa 7.100, ny sabotsy teo. Araka ny vaovao, dia nanatanteraka ny fihaonana ihany ny teo anivon’ny CUA saingy, tsy nisy afa-tsy 25 ireo taxi tonga niara-nidinika tamin’izy ireo tamin’izany. Noho izany, 25 amin’ny taxi 7 100 izany no tonga tamin’ny fampiantsoan’ny CUA, tetsy Mahamasina, ny sabotsy 23 septambra teo.
Afa-baraka tanteraka ny CUA, izay nitady marimaritra iraisana tamin’ny taxi. Tsy nisy nanohana ny antson’ny kaominina tamin’izany. Raha ny nambaran’ny filohan’ny FTAR, Clémence Raharinirina, hatrany, taxi efa notambatambazana vola ireo 25 tonga nanohana ny antson’ny CUA.
Hita, araka izany, ny tetika maloton’ny ben’ny tanàna, Lalao Ravalomanana, sy ny mpanolotsaina manokana, Marc Ravalomanana, amin’ny fampiadiana ny samy malagasy eo anivon’ireo mpitatitra taxi. Tian’izy ireo hiady indray mantsy ny eo anivon’ny FTAR sy ireo taxi 25 nantsoiny tetsy Mahamasina. Tsapa avy hatrany koa ny tsy fitiavan-dRavalomanana filaminana fa ny hanakorontana fiainam-bahoaka sy fiainam-pirenena hatrany. Tsy misy izay tsy mikorontana mantsy hatramin’ny naha mpanolotsaina manokan’ny Ben’ny tanàna an-dRavalomanana. Niadivan’ny CUA avokoa na ny mpivarotra, na ny mpitatitra, eny fa hatramin’ireo mpiasa eo anivon’ny kaominina aza.
Ankoatra izay, nilaza ny teo anivon’ny FTAR fa raha toa ka mbola miziriziry amin’ny heviny amin’ny fanomezana ny fitantanana ny ivon-toeram-pitsirihana fiara etsy Antsakaviro ny orinasa tsy miankina Omavet ny kaominina, hitohy ary hihamafy ny hetsika fanoherana ataon’ny Fikambanan’ny taxi. Tsiahivina mantsy fa efa nanatanteraka fitokonambe ny FTAR, ny talata lasa teo, ary nitaky ny fanoloana ny Ben’ny tanàna ho PDS izy ireo tamin’izany. Nambaran’izy ireo mantsy fa efa famonoana ny taxi mihitsy no ataon’ny Ben’ny tanàna sy ny CUA ankehitriny.
Raha ny tsilian-tsofina ihany koa, efa nifampiraharaha tamina mpivarotra fiara vaovao ingahy Marc Ravalomanana amin’ny hampidirana fiara taxi sy taksibe vaovao eto an-dRenivohitra. Izany rehetra izany no hanoheran’ny mpitatitra ny tetiky ny CUA amin’ny fanomezana ireo orinasa tsy miankina “akamakama” ny fitantanana ny “parking”, ny ivon-toeram-pitsirihana fiara, ny tsena, sns… Andrasana ny mety ho tohin’ny raharaha amin’ity herinandro vaovao ity.